Igbe na-ekpuchi ihe na-enweghị ihe ọhụụ na-enweghị ihe ọ bụla, nke nwere ike ịkụnye ikpo okwu, ikuku na-enweghị ike ikuku na-emepụta ihe n'igbe.
Nkọwa:Igbe Egwuregwu Nkwupụta Okwu nke Mmiri,Igbe Mgbaàmà nke nwere ọgụgụ isi,Ikuku Nkwupụta Uche Na-enweghị Nyocha,Ogwe Nkwupụta ụda nke nwere ọgụgụ isi na-enweghị mmiri,,
Igbe Egwuregwu Nkwupụta Okwu nke Mmiri,Igbe Mgbaàmà nke nwere ọgụgụ isi,Ikuku Nkwupụta Uche Na-enweghị Nyocha,Ogwe Nkwupụta ụda nke nwere ọgụgụ isi na-enweghị mmiri,,
Home > Ngwaahịa > Sistemụ Nkwupụta igwe > Igbe Egwuregwu Nkwupụta Okwu nke Mmiri
Ngwaahịa nke Igbe Egwuregwu Nkwupụta Okwu nke Mmiri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Igbe Egwuregwu Nkwupụta Okwu nke Mmiri , Igbe Mgbaàmà nke nwere ọgụgụ isi suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ikuku Nkwupụta Uche Na-enweghị Nyocha R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Igbe Egwuregwu Nkwupụta Okwu nke Mmiri Ngwa
Ike ike anyanwụ abụghị naanị nke zuru ezu ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, kamakwa ụdị ume ọhụrụ nke dị mma na gburugburu ebe obibi. Ugbu a, ọtụtụ ngwa ngwa ụlọ amalitela iji ike anyanwụ na-anagide ngwa eletrik. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ dịka ọkà okwu n'èzí, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ịgbanwere ike anyanwụ na ọkụ eletrik, ma nweekwa àgwà nke mmiri na-adịghị, mmiri na-ekpuchi, na-eguzogide okpomọkụ dị elu, wdg. ìhè ultraviolet, o nwere ike ịbụ nke ọhụrụ ma dịgide dịka ọhụụ. Njikọ Bluetooth kachasị mma.
1. Igwe okwu igwe Bluetooth na-eji nwayọ mara mma
2. Ekike ejiji na ime ihe ngosi, obere na obere mpe
3. Oghere kaadị TF wuru, kwado TF kaadị iji egwu egwu
Nwe nko nke i nwere ike iguzo na akpa azu gi iji mee ka mmega gi n'èzí bu obi egwu.
5. Zaa ekwentị ma jikọọ ekwentị na Bluetooth. A na-eji ọkà okwu enwee okwu okwu, nke enwere ike iji ngwa ngwa na nzere
6. Ejiji oghere ndị dị na mbara igwe na batrị lithium a na-agbanye n'ime ya, ọ nwere ike igwu egwu wireless naanị ya
7. Ekwentị mkpanaka, PC PC, MP3MP4 nwere ike jikọọ, na nhọrọ dịgasị iche nwere ike ịghọta ụda egwu egwu ikuku
Igbe Mgbaàmà nke nwere ọgụgụ isi
Ikuku Nkwupụta Uche Na-enweghị Nyocha
Ogwe Nkwupụta ụda nke nwere ọgụgụ isi na-enweghị mmiri